Fa maninona ireo mpivarotra indraindray no tsy afaka mividy safidy amin'ny IQOPTION?
IQOption » FAQ IQoption » Fa maninona ireo mpivarotra indraindray no tsy afaka mividy safidy amin'ny IQOPTION?
Fanontaniana: Maninona ireo mpivarotra indraindray no tsy afaka mividy safidy amin'ny IQ OPTION sehatra? Inona avy ireo antony?
IQ OPTION valiny (nalaina tamin'ny resadresaka): Misy fanontaniana maromaro miseho mandritra ny varotra. Ny tena fahita dia ny "Niova ny vidin'ny fananana", izay mazàna mipoitra mandritra ny fihoaram-pefy ambony, ary "Tsy misy safidy azo omena mandritra ny fahataperan'ity"
Amin'ity tranga ity dia manangana Exposure izahay araka ny statistika sy ny lazan'ny fananana. Amin'ny alina dia kely kokoa ny hetsika varotra, noho izany dia mihena ny fiatraikany. Izahay dia manitsy ireo soatoavina ireo indray mandeha isam-bolana ary tsy mitsaha-mitombo izy ireo. Ny fampahalalana momba ny fisian'ny safidy dia misokatra sy hitan'ny mpivarotra rehetra amin'ny fotoana tena izy mandritra ny varotra.
Manana adidy sasany amin'ireo mpivarotra izahay, ary mila manome toky izahay fa handoa raha misy tombony, izany no antony ananantsika fameperana toy izany amin'ny isan'ny safidy.
← Resadresaka ifanaovana amin'i Baiba - mpitantana kaonty IQOPTION Fa maninona no miova ny tombom-bolan'ny fananana mandritra ny andro? →